Diyo post :: धुर्त खड्क प्रसादको सत्ता टिकाउने खेल, ‘संविधानको चोर प्वालको खोजी’ धुर्त खड्क प्रसादको सत्ता टिकाउने खेल, ‘संविधानको चोर प्वालको खोजी’ - Diyo post
केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (माओवादी) केन्द्र बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहितका ठूला दलहरुले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको गुटका नेताहरु घाईते बाघ जस्तो बन्न पुगेका छन् ।
संसदमा अल्पमतमा परेपछि संसदीय परम्परा अनुसार आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरी राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निकट कानुन व्यवसायी र आफ्ना गुटका नेताहरुको सल्लाहा अनुसार आफूले राजिनामा नदिने र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निर्णयमा पुगेको सार्वजनिक गरे ।
सत्ताका शक्तिलाई राम्ररी बुझेका ओलीले केही दिन भएपनि सत्ता लम्ब्याउने र आफ्नो नीजि स्वार्थ पुरा गर्न यो बाटो अबलम्बन गरेको देखिन्छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त, संसदमा अल्पमतमा परेका काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई दुर्गामी असर पर्ने प्रकारले करोडौं रुपैयाँ बाड्ने र आफ्ना आसेपासेहरुलाई राजनीतिक नियुक्ती गर्ने थिएनन् होला । संसदीय लोकतन्त्रमा न्युनतम नैतिकता भएको नेताबाट यसप्रकारका गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी कार्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्य प्रमुखबाटै लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी राज्यको उपहास हुनु खेद जनक कुरा हो ।
माओवादीसँग भएको भद्र सहमति अनुसार बजेट पारित भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेर वाम गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने थियो । उक्त सर्तलाई माओवादीले अक्षरस पालना गर्दै आफूसँग भएको सहमति विपरित आएको बजेटलाई समेत पारित गर्न सहयोग ग¥यो । जुन बजेटमा माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरुको बजेट कटौती गरिएको थियो । कृषी मन्त्रालयले आम किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेकोमा बजेट विनियोजन गर्न अस्विकार गरेको थियो । यी सबै कुरालाई माओवादीले पचाएर एमालेसँगको सहकार्य र सहमतिको भावना अनुसार अगाडी बढेको थियो । तर, यो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अवज्ञा मात्रै गरेनन् उक्त सहमति नभएको समेत सार्वजनिक गरे ।
ओलीको सत्तामोहको यो झूट अभिव्यक्तिलाई एमालेकै शिर्ष नेताहरु वामदेव गौतम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले खण्डन गर्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको र त्यो सहमतिलाई लागु गर्नुपर्ने तथ्य सार्वजनिक गरे । माओवादीसँगको सहमति लागु गर्न पार्टी भित्र आएको दवावलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले सरकारको प्रमुख सहयात्री दल माओवादी केन्द्रसँग असहिष्णु व्यबहार प्रदर्शन गर्न थाले । जसकारण माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । बजेट पारित भएपछि सरकारको नेतृत्वको कमरेड प्रचण्डलाई छाड्ने सहमति गरेर कथित लोकप्रीय बजेट पारित गर्न सफल ओलीले खोलो त¥यो लौरो विस्र्यो भने जस्तोगरी माओवादीको ईमान्दारीतासँग खेलवाड गर्न थाले ।
उनले आफ्नै पार्टीका शिर्ष नेतासहित माओवादीसँग गरेको सहमति नभएको भन्दै माओवादीसहित आफ्नै पार्टीका शिर्ष नेता लगायत देश दुनियाँलाई ‘उल्लु’ बनाए । ओलीको यही बेइमानी र धुर्तपूर्ण व्यबहारका कारण माओवादी सरकारमा बसिरहन अनैतिक हुने ठहर गर्दै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो । जसकारण ओली सरकार धरापमा प¥यो । विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोईरालाले सहमति लागु नगरे आफै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा यीनै ओलीले ‘विदेशीको ईसारामा सुशील कोईरालाले सहमति उलंघन’ गरेको आरोप लगाउँथे । तर, यीनै ओलीले अहिले कसको इशारामा माओवादीसँगको सहमति उलंघन गरे ? उनले सहमतिको उलंघनसँगै माओवादीलाई भन्दा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै कांग्रेस सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे ।
ओलीकै व्यबहारका कारण माओवादी झनै विच्कियो र ओली सरकार संकटमा फस्यो । आफ्नै व्यवहारका कारण सहयात्री दल बाहिरिएपछि ओलीले भारतीय डिजाईन आफूलाई हटाउन लागेको आरोप लगाउँदै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्दैछन् । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने नाममा ओलीले संसद मार्फत आफू राष्ट्रवादी भएकै कारण हट्नु परेको सन्देश प्रवाह गरी नेपाली जनताको राष्ट्रवादी भावनामा खेल्न खोज्दैछन् । यति सामान्य कुराका लागि ओली यो नाटक गर्नुपर्ने थिएन ।
देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएर पनि उनले यो कुरा गर्न सक्थे । तर, ओलीले ‘मर्न परे खुट्टै तन्काएर मर्ने’ नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्न खोज्दैछन् ।
ओली ईतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट चुके । उनले सहयात्री दल माओवादी केन्द्रसँग गरेको सहमति लागु गर्न तयार भएको भए उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका उल्लेखनीय कामहरुले निरन्तरता पाउँथ्यो ।
माओवादी र एमाले जस्ता ठूला कम्युनीष्ट पार्टीबीचको सहकार्य निर्वाचनसम्म जानसक्थ्यो जसले नेपालको ठूलो वाम शक्तिलाई उत्साहित बनाउन सक्थ्यो । यो अवसर ओलीकै कारणले गुमेको छ । यो यथार्थ एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा समेत मुखरित भयो ।
उक्त बैठकमा अधिकांश एमाले स्थायी समिति सदस्यहरुले ओली प्रवृतिको कारण माओवादी एमालेको सम्बन्धको भविष्य धरापमा परेकोमा आलोचना गरेका थिए । तर, ओली यो कुरालाई अस्विकार गर्दै आफ्ना गुटका युवाहरुलाई सडकमा पठाएर कथित राष्ट्रवादको तमासा देखाउँदै छन् ।
पुरानो संसदीय व्यवस्थाका चतुर खेलाडी ओली गणतन्त्रका सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत हिजोकै विकृत संसदीय खेलको पुनारावृति गर्न कस्सिएका छन् । उनले सरकारको आयु लम्ब्याउन विविध खाले धुत्र्याइँ र हत्कण्डाहरु अपनाइ रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपनि नयाँ सरकार गठन गर्नलाई संवैधानीक व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै ओलीले दुनियाँलाई बेकुफ बनाउन खोज्दैछन् । यीनै ओली भनाई मान्ने हो भने सुशील कोईराला पछि संविधानको कुन धारा अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ? संविधानको कुन धारा अन्तर्गत शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ की ओली कति निर्लज्ज र धुर्त व्यक्ति छन् भन्ने कुरो ।
संसदमा आफू अल्पमतमा परेपछि पनि सत्ता मोहका कारण ओलीले संविधानका कमजोर पक्ष खोज्दै हिँडेका छन् । संविधानमा कहाँ निर प्वाल भेटिन्छ र त्यहाँबाट छिर्न सकिन्छ भन्ने छिड्के दाउमा ओली र उनका झूण्डहरु लागेका छन् । जसरी हुन्छ सत्तामा टिकिरहने ओली नियतका कारण वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रति नै आम मान्छेको वितृष्ण पैदा हुने खतरा देखिँदैछ । पुरानो संसदीय कालको विकृत भद्दा संस्कृतिलाई ओलीले जबरजस्त स्थापित गर्न खोज्दैछन् ।
उनीसँग थोरै मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र हुन्थ्यो भने, संसद र सहयात्री दलहरुको विश्वास गुमाइसकेपछि पदबाट राजिनामा दिन्थे । त्यसका लागि उनी धेरै टाढा बेलायतको डेविड क्यामरुनबाट होईनकी गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पनि सिक्नुपथ्र्यो । अध्यक्ष प्रचण्ड जसले सेनापति प्रकरणमा आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको मुल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न कोशिस गरेका कमरेड प्रचण्ड ईतिहासमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदैछन् । नेपालको संसदीय फोहरी राजनीतिलाई सफा गर्नको लागि प्रचण्डका अगाडी केही गम्भिर चुनौतीहरु पनि खडा भएका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न विशेष भूमिका र अगुवाई गरेका प्रचण्ड त्यही संविधानलाई लागु गर्ने सवालमा देखापरेका चुनौतीहरुको सामना गर्दै मुुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्नका लागि देशको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्दैछन् ।
ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, संविधानसँग असन्तुष्ट पक्ष मधेसी जनजाति थारु लगायतका मागहरुलाई संवोधन गर्ने, भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत पु¥याउने विस्तृत शान्ति सम्झौताका एकमात्र हस्ताक्षर कर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरुलाई पुरा गर्दै संविधानले निर्दिष्ठ गरे बमोजिम स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीलाई कुशलता पूर्वक सम्पन्न गर्नु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका प्रमुख कार्यभार हुनेछ । त्यसका लागि मधेसी मोर्चालाई साथमा लिएर अगाडी बढ्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।
यद्धपी मधेसी मोर्चाले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । तथापी, प्रचण्डको आगामी बाटो त्यति सहज भने छैन । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका कारण सत्ताच्युतको पीडा भोगेको एमालेले मुलुकका भावी समस्या समाधान गर्न रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा आशंका छ । मधेसी, जनजाती र थारुहरुको माग संबोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिने हुँदा एमालेको सहयोग अनिवार्य छ ।
स्वयमं कांग्रेस–माओवादी दुई भिन्न विचार र वर्गका प्रतिनिधी संस्था हुन् । युद्धकालमा यी दुई पार्टीबीच आमने सामने भिडन्त भएको थियो । यसका बाबजुत पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया यीनै दुई पार्टीका सम्झौताबाट शुभारम्भ हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । यी दुई पार्टी ठाउँमा हुँदा मुलुकको राजनीतिक गतिरोधले गति लिने र भिन्न ठाउँमा उभिँदा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा देखा परेको गतिरोध अन्त्यको लागि पनि यी दुई पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएर एतिहासिक दायीत्व र जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, चुनौतीका भिमकाय पहाडहरु पनि खडा छन् ।
ती चुनौतीको सामना गर्दै ईतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक बहन गर्ने दायीत्व प्रचण्डको काँधमा आएको छ । त्यसका लागि उनले वर्तमान गतिरोध अन्त्यको लागि एमालेसँगको सहयात्रा त्याग्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । यदी निर्णय नगरेर कथित वाम एकताको नाममा एमालेसँगको सहयात्रा कायम राखेको भए मुलुक यथास्थितीमै रहने थियो । र, सरकारमै रहँदा पनि विभिन्न षड्यन्त्र र बहानामा माओवादीलाई एकएक गाँस गरेर निल्ने नीति ओली समुहले लिएको थियो । रुपमा सँगै सारमा सिद्धयाइने ओलीको खतरनाक चक्रब्युबाट प्रचण्डले माओवादी पार्टीलाई मुक्त गरेका छन् ।
लेखक माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
२०६३ सालकाे भाद्र महिना । भर्खरै १५ वर्ष पुरा भएर १६ मा टेकेको थिएँ । कक्षा ९ को प्रथम त्रैमासिक ...